केईसीका विद्यार्थीहरू विदेशका राम्रा र ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा माष्टर्स र पीएचडी गरिरहेका छन् |
अन्तवार्ता बिहीबार, ११ असोज, २०७५
कालिमाटीस्थित काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज (केईसी), त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई बिई सिभिल, बिई कम्प्युटर, बिई इलेक्ट्रीकल, बी आर्क, बीई इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेशन इन्जिनियरिङ अध्यापन हुँदैं आएको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षामा नीजि क्षेत्रका कलेजहरुतर्फ अग्रणी मानिने केईसीका प्रोडक्टहरु अब्बल मानिन्छन् । राम्रो शैक्षिक वातावरण, सुविधासम्पन्न हाइटेक ल्याबसहित प्रतिष्ठित फ्याकल्टीहरुलाई पनि केईसीको विशेष पक्ष मानिन्छ ।
साढे १७ रोपनीमा क्षेत्रफलमा फैलिएको केईसीले हाल ३० रोपनी जग्गामा होस्टेलसहितको कलेज बनाउनका लागि थप जग्गा खरिद गरिसकेको छ । शैक्षिक वातावरण, अब्बल फ्याकल्टी, सुविधासम्पन्न ल्याब, ख्यातिप्राप्त ब्यवस्थापन टिम रहेको केईसीका सल्लाहकार प्रोफेसर .डा. दिनेशकुमार शर्मासँग गरिएको कुराकानीः
केईसीको फ्याकल्टीबारे जानकारी दिनुहोस न ?
हामीले बिई सिभिल, बिई कम्प्युटर, बिई इलेक्ट्रीकल, बी आर्क, बीई इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ चलाइरहेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले यस शैक्षिक सत्रदेखि आफ्नो एउटा कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरेको हो, यो सबै क्याम्पसमा लागु भएको छ । पहिले रहेको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भन्ने थियो त्यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेशन बनाइएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा इन्फर्मेशन थपेर परिमार्जित गरिएपछि त्यसमा नवीन कुराहरु के छन ?
इलेक्ट्रोनिक्स र कम्युनिकेसनका कुराहरु यथावत छन् । कम महत्वपूर्ण कोर्सहरु झिकेर इन्फर्मेशन इन्जिनियरिङका नवीनतम कुराहरु राखेका छौं । अहिलेको जमाना भनेकै इन्फर्मेशनको जमाना हो, सूचनालाई कसरी कम्प्युटरको माध्यमबाट मानिसको हितका लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे कोर्समा थपेका छौं ।
अन्य सबै फ्याकल्टीहरुमा भर्ना सिट पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स फ्याकल्टीमा विद्यार्थीहरुको कोटा पूरा हुन नसक्नुको कारण के हो ?
गत केही वर्षदेखि नै इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसमा विद्यार्थी कम भइरहेका थिए । त्यसलाई परिमार्जित गरेर समयसापेक्ष झन प्रभावकारी बनाइएको हो । संसारमा जे डिमान्ड छ, अहिले सूचना प्रविधीको जमाना छ, त्यसकारण सूचना सम्बन्धि अध्ययन पनि गराउनुपर्छ भनेर त्यसलाई परिमार्जन गरिएको हो ।
नेपालमा इन्जिनियरिङका कुन—कुन विद्यामा बढी आकर्षण छ ?
अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा इन्जिनियरिङ विषयमध्येमा सिभिलमा विद्यार्थीहरुको चाप छ । त्यसपछि कम्प्युटर, बी आर्कमा आकर्षण राम्रो छ । अरुमा विगत वर्षहरुदेखि नै विद्यार्थीहरु कम भइरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङका उत्पादनहरुको गुणस्तर कस्तो छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ कलेजहरुको राम्रो ख्याति छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आफ्नै चार वटा कलेजहरु छन् । सम्बन्धनप्राप्त नीजि क्षेत्रका ६ वटाजति कलेजहरु छन् । यी सबै इन्जिनियरिङ कलेजहरुका उत्पादनको गुणस्तर एकदमै छन् । हाम्रो उत्पादन पनि स्वभाविक रुपमा राम्रा हुने भइहाले ।
विदेशका कुनै शैक्षिक संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गरिरहनुभएको छ कि ?
काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजको विदेशका धेरै कलेजहरुसँग पनि एमयु गरेको छ । केईसीबाट पास आउट भएका हाम्रा विद्यार्थीहरुले विदेशका राम्रा र ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा माष्टर्स र पीएचडी गरिरहेका छन् ।